लामो समय मास्क लगाउँदा मृत्युसम्मको खतरा ! – Sanchar Patrika
July 26, 2020 159
कोरोनाको महामारीले मानिसहरु संक्रमणबाट बच्न मास्कको प्रयोग गर्दछन् । तर कतिपय अवस्थामा त्यहि मास्कले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ ।यदि तपाई पनि मास्कको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? लामो समय सम्मप्रयोग गर्नुहुन्छ भने सावधान ! यसले तपाईको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
Prevराजु परियार र कमला घिमिरेको पहिलो गीत (भि’डियो सहित)
Nextशरीरबाट पसिना निस्किदा हुन्छ यस्तो फाइदा